Waaxda Interpol oo ka saartay liiska dadka ay "rabto", caalimka weyn Yuusuf al-Qaradawi - Horn Future
DOHA (Horn Future)-Waaxda Interpol ka ee booliiska caalamiga ah ayaa ka saartay liiska dadka ay “rabto”, caalimka weyn Yuusuf al-Qaradawi madaxa Ururka Caalamiga ah ee Culumadda Muslimiinta ah ee fadhigiisu yahay Dooxa,sida uu ku dhawaaqay Ururka Carabta ee Xuquuqda Bini’aadanka ee (AOHR).
War qoraal ah oo uu soo saaray ururka (AOHR) ayaa waxa uu ku sheegay in Interpol ay soo gabogebeysay baadhitaankeeda in caalimkan caanka ah ee muslimka ah uunan joogin Masar xilligii lagu eedeeyay dambiyada lagu soo oogay, taas oo caddeyneysa inuunan dambi lahayn.
Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sii waday in ay soo tebiso in Interpol ay wali “macluumaad dheeraad ah” ku saabsan dhacdooyinka rabshadihii Masar ka dib, ku soo gabagabeysay in dhammaan dadka keliya ee ay ku eedeeyeen Qaahira ay ahaayeen kuwo aan waxba galabsan oo dambiile ah.
Guddoomiyaha ururka AOHR Maxamad Jamiil ayaa ku tilmaamay natiijooyinkan Interpol inay yihiin “guul ka soo horjeedda taliska [Masar],kaas oo dilay Masaari,xidhayna dad badan oo lagu soo oogay dacwad,kuwaas oo jidh-dil loo gaystay si ay u qirtaan wax aynan gaysan.
Waaxda Interpol ka ayaa soo saartay “ogeysiis casaan ah” oo ka dhan an al-Qaradawi sannadkii 2014 iyada oo lagu salaynayo codsi uu soo dhigay taliska dilaaga Sisi, kaas oo ku eedeeyay caalimkan inuu huriyay rabshado,dhac iyo burburin iyo xadgudubyo kale.
Al-Qaradawi ayaa waxa lagu yaqaanaa in si adag ee uga soo horjeedo dilaaga Sisi iyo inuu dhaleecayn joogtada ah u jeediyay kaligii-taliyahan xasuuqa aadka u ba’an ka gaystay dalka Masar xilligii uu ahaa wasiirka difaaca kaas oo uu ku laayay kumanaan qof oo rayid ah kadib markii uu afgamibyay 2013 kii madaxweynihii u horeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto Maxamad Mursi.
« Erdogan urges Muslim countries to help Rohingya	» Kuuriyada Waqooyi oo ugu hanjabtay Maraykanka xanuun aynan hore u arag